Gargaarsii Tigraay Seenuu Kan Ibse Tokkuummaan Mootummootaa Garu Ga’aa Miti Jedhe
Konkolaataa WFP nyyata fe'ee gara Tigraay deemu (Suuraa faayilii)
Konkolaataan fe’umsaa 27 kanneen gargaarsa nyaataa fi kanneen biroo Neetriik Tonii kuma tokko fe’anii dhuma torban dabree Maqalee seenuu isaanii waahiloonni keenya nutti himan jechuun dubbii himaan Tokkummaa Mootummootaa Steefan Jaarik ibsanii jiru.
Gargaarsa gamasitti erguun baatii darbee erga eegalamee as inni kun yeroo 4ffaaf ta’u ibsanii, kunis baatii sadiif gargaarsa erguun eega addaan cite booda jedhan.Waluumaa gala erga gargaarsa erguun kun jalqabamee as kokoolaataan gargaarsa fe’an 169 Tigraay seenuu fi kan abdii kutannaan eegamuu gargaarsa meetriik tonii 4300 gamas aseenee jira.
Boba’an dhiiyeenya kana seenees hojii akkaan barbaachisaa ta’an itttiin babal’isanii gaggeessuuf kan oolee yoo ta’u, gargaarsii Tigraay seenaa jiru garu isa barbaachisuu keessaa xinnoo ta’u dubbii himaan kun ibsanii jiru.
Tajaajilli barbaachisoo ta’an kan akka Eleektrikaa, caasaalee qunnamtii fi baankii dabalatee kanneen biroon harka caalaan akka citeetti jira.Tokkummaan mootummootaa michoota keenya waliin gargaarsii Tigraay hatattamaan akka dhaqqabu gochuuf aangawoota waliin hojjanna jedhanii, kunis sanyii midhaanii, xaa’oon baatiin itti midhaan facaafatan akka gamas dhaqqabu dabalata jedhan.
Bulchiinsa naanoo Afaar fi Amaaraa keessatti walitti bu’iinsa uumameen kanneen miidhamaniif, gargaarsii barbaadamuu akka ballinaan kennamuufi aangawootawaliin hojjanna jedhan.Torban dabree bulchiinsa Amaaraa keessa uummata kuma 56 ta’u michoonni keenya nyaata raabsanii fi jiru jedhanii, dhuma baatii Muddee jalqabee uummanni Miliyoona 19 caaluu mootummaa tokkummaa mootummootaa fi jaarmayoota kan mootummaa hin ta’iin ykn NGO biraa gargaarsa nyaataa argachuun ibsanii ibsamee jira.